Maalinta: Maarso 9, 2017
Nexans waxay soo jiidatay fiiro weyn ka soo booqdayaasheeda Eurasia Rail 2017: 3 ugu weyn adduunka ee duurkeeda. wuxuu la kulmay kaqeybgalayaasha asia Eurasia Rail 2017 taşıyan oo loo qabtay markii toddobaad ee sanadkan. [More ...]
YGS'ye ee basaska magaalooyinka ee Denizli lacag la'aan
YGS'ye waxay gali doontaa basaska Magaalada Denizli oo bilaash ah: Basaska Dawlada Hoose ee Magaalada Denizli waxaa la qabandoonaa dhamaadka usbuucaan Gudbinta Imtixaanaadka Tacliinta Sare (YGS 2017) waxay bilaash u noqon doontaa shaqaalaha imtixaanka. Denizli Metropolitan Municipal, Jaamacadda [More ...]
Dejinta YGS ee gaadiidka dadweynaha ee Eskisehir: Eskisehir Metropolitan Municipal, 12 Maarso 2017 Axad iyo dhalinyaro badan oo xiriir dhow la leh nolosha waxbarashada kahor iyo kadib Imtixaanka Imtixaanka Tacliinta Sare (YGS) iyo [More ...]
Gaadiidka Dadweynaha wuxuu u noqon doonaa bilaash ardayda soo geleysa YGS ee Istanbul: 12 ee Istanbul waxaa lagu qaban doonaa Axada bisha Maarso ardayda iyo saraakiisha YGS'de, gawaarida gaadiidka dadweynaha ayaa si bilaash ah uga faa'iideysan doona. Golaha Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul, 12 Mart [More ...]
Meesha Xayeysiiska Wargeysyada Tram Uu Marayo: Xayeysiiska wargeysyada Tram, oo ay soo saartay SAMULAŞ, oo xiriir la leh Dawladda Hoose ee Magaaladda Metroun, lama xallin karin. 3 ayaa lumisay kalsoonida sanado, marka laga reebo saxaafadda [More ...]
Isbeddelka dariiqa ee khadadka gaadiidka dadweynaha ee Kocaeli: Waaxda Gaadiidka Dadweynaha ee Magaalada Kocaeli waxay sameysay isbadal wadada si loo yareeyo socodka gaadiidka u dhexeeya Izmit Mehmet Ali Pasha iyo Bekirdere Ucyol. gaar ah [More ...]
TCDD waxay ku taallaa Eurasia Rail
At Eurasia Rail, istaandarka TCDD wuxuu ahaa diiradda dareenka: 7. Tareenka Caalamiga ah, Nidaamyada Tareenka fudud, Bandhiga iyo Caddeynta Suuqa-Eurasia Rail 2017 Fair, 2-4 waxaa la qabtay intii u dhexeysay March 2017 ee Xarunta Bandhigga ee Istanbul. [More ...]
Talyaaniga, cunuga ku jira wadooyinka ayaa sameeyey naftiisa
Talyaaniga gudahiisa, wiilka samaynaya iskoorka wadooyinka tareenka ayaa lagu qabtay tareenka: Dalka talyaaniga, wiil doonayey inuu iskiis u qaato taleefanka gacmeed ee tareenka saaxiibadiisa, wuxuu ku dhintey tareenka hoostiisa. 3 magaalada Catanzaro, ee koonfurta dalka [More ...]
Ku habboonaanta darawalada xadgudubka ka geystey tunnel-ka Eurasian Tunnel: The Eurasian Tunnel wuxuu dammaanad ka qaadayaa in darawalada sameynaya isgoyska aysan yeelan doonin wax cabasho ah iyagoo ilaalinaya aqoonsigooda. Ku bixinta ikhtiyaarka lacag bixinta sugan oo leh nidaam aamin ah 3D [More ...]
Metrobus oo ka socota IETT: Metrobus waxaa isticmaala boqolaal kun oo qof maalin walba magaalada gudaheeda, waqtiga 'ring' ayaa bilaabmaya. Xargaha-mitrooga ee ka tagaya afarta joogsi ee waaweyn ayaa si isdaba joog ah u sii socon doona illaa halka loo socdo oo dhammaystiraya socdaalka. Shabakada codsi cusub [More ...]
Marxalad cusub ayaa ka bilaabmeysa magaalooyinka waaweyn: Codsi cusub ayaa ka bilaabmaya magaalada gudaheeda ee ay boqolaal kun oo qof maalin walba u adeegsadaan Istanbul. Sida ku xusan arjiga cusub, qodobbada sababa hoos u dhaca qadka BRT oo leh Mashruuca Awoodda Dhismaha Metrobus [More ...]
RayHaber 09.03.2017 Warbixinta Shirka
Qalabka Turbo Lagu iibin doono (TÜLOMSAŞ) Adeegga Shaqaalaha ayaa la Helayaa
Sawirada ugu horreeya ee ka yimaada mashruuca Hyperloop One ee mashruuca Nevada
Sawirradii ugu horreeyay ee mashruuca Hyperloop One ee Nevada: Marka nidaamka gaaska Hyperloop la hirgaliyo, waxay awoodi doontaa inay yareyso masaafada 10 saacadood baabuur illaa 1 saac. Hyperloop One, oo ujeedadiisu tahay inuu abuuro nidaamka gaadiidleyda ugu dhakhsaha badan adduunka [More ...]
1915 Bridge Bridge ayaa kordhisay qiimaha dhulka
Buundada '1915 Çanakkale Bridge waxay kordhisaa qiimaha dhulka: 1915, buundada ugu dheer ee ganaaxa adduunka, waxaa la dejin doonaa 18 Maarso, sanadguurada Guusha Çanakkale. Yapı Merkezi, oo ka kooban Limak iyo shirkadaha South Korea [More ...]